မူလစာမျက်နှာ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း ဓမ္မရသစာပေဓမ္မရသစာအုပ်များဓမ္မရသဆောင်းပါးများဓမ္မရသစာတိုများဓမ္မရသကဗျာများ တရားတော်ကဏ္ဍVCD - တရားတော်MP3 - တရားတော်ထုတ်လွှင့်မှုတရားတော် မှတ်တမ်းကဏ္ဍမှတ်တမ်းဗီဒီယိုကဏ္ဍမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံကဏ္ဍတရားတော်ထုတ်လွှင့်မှုမှတ်တမ်းကဏ္ဍ သာသနာပြုလုပ်ငန်းများပြည်တွင်းသာသနာပြုလုပ်ငန်းများပြည်ပသာသနာပြုလုပ်ငန်းများ ဆက်သွယ်ရန်
Joomla gallery by joomlashine.comSLIDESHOWrusyd2.pnghttp://russiasayataw.com/images/stories/PIC/rusyd2.pngrusyd1.pnghttp://russiasayataw.com/images/stories/PIC/rusyd1.pngrusyd3.jpghttp://russiasayataw.com/images/stories/PIC/rusyd3.jpg
ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်းချုပ်အိမ်ထောင်ရေးနှင့်ဝိပဿနာအနားမှာ ဘုရားရှိနေပါစေအားကိုးစရာ အစစ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်ရုံနဲ့Enlightenment ကို ရနိုင်ပါသလား?ဆေးလိပ်နှင့်ဝိပဿနာဖန်ဆင်းရှင်နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအသားအရောင်မတူတာကံအကျိုးပေးလား?ပဋ္ဌာန်းအကြောင်း လေ့လာကြရအောင်လူတိုင်းအတွက် ၀ိပဿနာဘ၀ဟူသည်အကျဉ်းထောင် (ဓမ္မပိယဆရာတော်)မွေးနေ့မင်္ဂလာတေးကဗျာ (ဖိုးသားရေးဖွဲ့သည်)ရဟန်းဘ၀နှင့်လောကီမင်္ဂလာအိပ်မက်ထဲက ကုသိုလ်နှင့်အကုသိုလ်မသေခင် တရားမြင်ဖို့ အရေးကြီးသည်သမ္မုတိသစ္စာနှင့်ပရမတ္တသစ္စာယောဂကျင့်စဉ်နှင့်ဝိပဿနာအိပ်မက်နှင့်ဘုရား၊ ရဟန္တာပညာကို ဘယ်လိုရအောင်ယူမလဲစိတ်စင်ကြယ်မှ ရုပ်စင်ကြယ်မည်သာဓုခေါ်ခြင်းအကျိုးဝန်ထုပ်ကြီးနဲ့ခရီးသည် ဘယ်သွားမလဲကွယ်လူ့ဘ၀ဖြင့် ရဟန္တာဖြစ်ခဲ့သော်သတ္တမသံဂါယနာနှင့်မြန်မာနိုင်ငံသံဝေဂတရား နေ့စဉ်ပွားတစ်နေ့ရွှေ တစ်နေ့ငွေလွတ်လပ်ရေးနေ့တရားတော်သိမှတ်စရာ ဘာသာရေးပြဿနာမေတ္တေယျဘုရားရှင်ဆည်းပူးလေ့လာ ပါရမီဆယ်ဖြာအလှုရေစက် (ဒက္ခိဏောဒက)စုန်မှာလား၊ ဆန်မှာလား?ကိုယောဂီနှင့် မခန္ဓာအာဇီဝဋ္ဌမကသီလစောင့်သင့်/မစောင့်သင့်ကျန်းမာခြင်းနှင့်တရားအားထုတ်ခြင်းတဏှာက ရောက်ရာမှာပျော်သည်
LOGO OF TBYO
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် “အလှုရေစက် လက်နဲ့မကွာ” ဆိုရလောက်အောင် ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုခြင်း၌ မွေ့လျော်ကြပေသည်။ ကောင်းမှုကုသိုလ် တစ်ခုခုပြုတိုင်း အမျှဝေခြင်း၊ သာဓု ခေါ်ခြင်း ဆိုသော အမှုတို့ကို ပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါသည်။ ဤနေရာတွင် အမျှဝေခြင်းလေးမျိုးရှိပါသည်။(၁) ဒါနကုသိုလ်ကို အမျှဝေခြင်း(၂) သီလကုသိုလ်ကို အမျှဝေခြင်း(၃) သမထကုသိုလ်ကို အမျှဝေခြင်း(၄) ၀ိပဿနာကုသိုလ်ကို အမျှဝေခြင်း။ အမျှဝေသောပုဂ္ဂိုလ်များက ၄င်းလေးမျိုးကို ပေးဝေပါသော်လည်း သာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုကြသော သူတို့မှာ ဒါနကုသိုလ်တစ်မျိုးသာ ရရှိကြသည်ဟုဆိုပါသည်။ ဒါနကုသိုလ်ကို သာဓုခေါ်လျှင် ဒါနကုသိုလ်ပင် ရသည်၊ သီလကုသိုလ်ကို သာဓုခေါ်လျင်လည်း ဒါနကုသိုလ်ပင်ရသည်၊ သမထကုသိုလ်ကို သာဓုခေါ်လျင်လည်း ဒါနကုသိုလ်ပင်ရသည်၊ ၀ိပဿနာကုသိုလ်ကို သာဓုခေါ်ဆိုပါကလည်း ဒါနကုသိုလ်ပင် ရပါသည်။ ဤနေရာတွင် အမျှဝေခြင်း၊ သာဓုခေါ်ခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပျားကုန်သည် ညီနောင်သုံးယောက် အကြောင်းကိုလေ့လာဖတ်ရှုသင့်ပါသည်။ ညီငယ်ဖြစ်သူက ပစ္စေကဗုဒ္ဓါအရှင်မြတ်အား ပျားရည်ကို လှုဒါန်းပြီး သူဆုတောင်းတာက “ဘုရားတပည့်တော်သည် ဤကောင်းမှုကြောင့် ဤဇမ္မူဒီပကျွမ်း၌ အထက်တစ်ယူဇနာ၊ အောက်တစ်ယူဇနာ အာဏာပျံ့နှံ့ရပါလို၏ အရှင်ဘုရား” ဆုတောင်းလိုက်တယ်။ သူ့အကိုကြီး နှစ်ယောက်က ထိုကောင်းမှုကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓု အနုမောဒနာ ပြုကြပါသတဲ့။ ၄င်းကုသိုလ်ကံကြောင့်ပင်လျှင် အလှုရှင်ဖြစ်သော ညီငယ်လေးက အသောကမင်း ဖြစ်လာသည်၊ သာဓုခေါ်သော အကိုနှစ်ယောက်တို့တွင် တစ်ယောက်က သီဟိုဠ်ကျွန်းမှာ ဒေ၀ါနံပိယတိဿမင်း ဖြစ်လာသည်။ အကိုအကြီးဆုံးကတော့ နိဂြောဓ ရဟန္တာ မထေရ်မြတ် ဖြစ်လာပါသည်(သာရတ္တ)။
ရုရှားသာသနာပြုဆရာတော်၁၅/၂/၂၀၁၁ စိတ်စင်ကြယ်မှ ရုပ်စင်ကြယ်မည်
ကောင်းဆိုး နှစ်ဝ၊ ခွဲခြမ်းပြ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ။ ချမ်းသာနှစ်ဝ၊ လမ်းညွှန်ပြ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ။ စိတ်သန့်စင်မှ၊ ရုပ်စင်ရ၊ မုချဧကန်သာ။ အပြင်ရုပ်ပြ၊ စင်ကာမျှ၊ တွင်းက စင်ခဲစွာ။ ( စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာဆရာတော်)
မြတ်စွာဘုရားက ဓမ္မပဒပါဠိ ၊ စိတ္တ၀ဂ္ဂ၌ “အလွန်သိမြင်နိုင်ခဲ၍ အလွန့်အလွန်လည်း သိမ်မွေ့လျက် ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး သူကျချင်သည့် အာရုံ၌ ကျနေတတ်သည့်စိတ်ကို ပညာရှိသည် စောင့်ရှောက်ရာ၏။ လုံခြုံအောင် စောင့်ရှောက်ထားသည့် စိတ်သည် ချမ်းသာကို ရွက်ဆောင်တတ်၏” ဟု ဟောတော်မူသည်။ လုံခြုံအောင် စောင့်ရှောက်ထားသည် စိတ်ဟူ သည်မှာ ကိလေသာအညစ်အကြေးကင်းနေသည့်စိတ်ဖြစ်သည်၊ အရဟတ္တမဂ်၏အခြားမဲ့၍ အရဟတ္တဖိုလ်ခဏမှစပြီး ကိလေသာတွေ လုံးဝဥဿုံ ကင်းပြတ်တော့သွားသည်၊ အဲ့ဒီတော့ စိတ်ဓာတ်မှာ ဘယ်အခါကျမှသာ ကိလေသာ အညစ်အကြေး မ၀င်တော့ဘဲ အစဉ်ထာဝရသန့်ရှင်း သွားသည်ဟုဆိုပါသည်။ အရဟတ္တဖိုလ်ရောက်အောင် အားထုတ်တယ်ဆိုတာကတော့ သီးသန့်အားထုတ်ရသည် မဟုတ်၊ အရဟတ္တမဂ်ရောက်ရင် အရဟတ္တဖိုလ်ရောက်တော့သည်ဟု မှတ်ရပါမည်။ မြတ်စွာဘုရားက “အာသဝေဟိ စိတ္တံ ၀ိမုတ္တိ-အာသဝေါတရားတို့မှ စိတ်လွတ်မြောက်သည်”စသည်ဖြင့် အရိယာမဂ်၊ ဖိုလ်ရောက်အောင် ကျင့်မှ စိတ်ဟာ အာသဝေါကိလေသာ အညစ်အကြေး၊ အနှောင်အဖွဲ့မှ ကင်းလွတ်မြောက်ကြောင်း ဟောတော်မူ ပါတယ်။ သီလ၀ိသုဒ္ဓိကို ပြည့်စုံစေပြီးတော့ စိတ္တ၀ိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့ အခြေခံသမာဓိကို ပြည့်စုံစေရပါတယ်။ ၄င်း သီလ၊ သမာဓိကို အခြေခံပြုပြီးတော့ ၀ိပဿနာကုသိုလ်ကို ဖြစ်ပွားစေရမယ်၊ ထို့နောက်ဝိပဿနာဖြင့် မဂ်ကုသိုလ်ကို ဖြစ်ပွားစေရမယ်၊ အရဟတ္တမဂ်ထိပွားစေခြင်းဖြင့် အရဟတ္တဖိုလ်ရောက်ပြီး စိတ်ကိုစင်ကြယ်စေရမည်ဖြစ်သည်။ (ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်)
ရုရှားသာသနာပြုဆရာတော် ၁၄/၂/၂၀၁၁ ပညာကို ဘယ်လိုရအောင်ယူမလဲ
အာဠာဝကသုတ္တန်မှာ အာဠ၀ကကြီးက မြတ်စွာဘုရားကို လျှောက်တယ်’ ပညာကို ဘယ်လို ရအောင်ယူမလဲ’တဲ့။ ဒီတော့ မြတ်စွာဘုရားက ပညာရတဲ့နည်းကို ဖြေတယ်’သုဿုသာ လဘတေ ပညံ’ သင်ယူချင်တဲ့စိတ်၊ နားလည်ချင်တဲ့စိတ်၊ နားထောင်ချင်တဲ့စိတ်၊ နားထောင်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရင် ပညာရပါတယ်။ ကြည့်လေ တရားပွဲလာ တရားနာတယ်ဆိုတာ ပညာမရဘူးလား၊ ဒါ နာချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်မို့ ဒီပညာကရတာ၊ တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာလဲ ကြိုးစားပြီးတော့ မှတ်မှတ်သားသား နာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူက မမှတ်မိဘူးလား၊ အေး ဒါကို ပြောတာ၊ မြတ်စွာဘုရားက ပညာရချင်တယ်ဆိုရင် တတ်ချင်တဲ့စိတ်က အဓိကတတ်ချင်တဲ့ စိတ်ရှိရင်တတ်ပြီ။ ရှေးတုန်းက ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးက လူငယ်တွေကို ပြောလေ့ရှိတယ်၊ လူငယ်တွေကို တွေ့လို့ရှိရင်’မင်းစာတတ်ချင်လား’တဲ့ ၊ ‘တတ်ချင်ပါတယ်ဘုရား’လို့ ပြောတဲ့အခါ ဆရာတော်ကြီးက‘အေး တတ်ချင်ရင် တတ်ပါပြီကွာ’လို့ပြောတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တတ်ချင်တဲ့စိတ်ဟာ ပညာရဲ့မုဒ်ဦးပဲ၊ စာတတ်ဖို့ရန်အတွက် စာတတ်ချင်တဲ့စိတ်ဟာ အဓိက၊ ဒါကြောင့်မို့ ပညာရဖို့အတွက် ပညာရချင်တဲ့စိတ်၊ သင်ချင်တဲ့စိတ်ဟာ အဓိကမကျဘူးလား၊ ကျတယ်၊ သင်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှ ပညာကိုရအောင်သင်တာပဲ၊ ဒါကို မြတ်စွာဘုရားက ’သုဿုသာ လဘတေ ပညံ’လို့ပြောတာ။ ပညာဆိုတာကလည်း အဆင့်ဆင့်ပဲ၊ လောကီပညာရှိတယ်၊ လောကုတ္တရာပညာရှိတယ်။ သိချင်တဲ့ပညာ တစ်ခုထက်တစ်ခုမြင့်လာတယ်၊ ၀ိပဿနာပညာဆိုတာ ဘာလဲ၊ မဂ်ပညာ ဆိုတာ ဘာလဲ၊ သိချင်လာတယ်၊ သိချင်လို့ ကြိုးစားတယ်၊ သင်တယ်၊ ကျင့်တယ်၊ ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရားက ပညာရကြောင်းကို ဖြေတာ။
စိတ်ဖြူစင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? လောကလူတွေရဲ့စိတ်ဟာ ဖြူစင်သွားအောင် ဘာနဲ့လုပ်ရမတုန်းဆို မြတ်စွာဘုရားက“ပညာယ ပရိသုဇ္ဈတိ-ပညာဖြင့်သာ ဆေးကြောလို့ ရတယ်”။ လူတွေရဲ့စိတ်ဟာ ပညာဖြင့် ဆေးကြောတယ်ဆိုရင် ကိုယ့် စိတ်ထဲမှာ ကြည်နေတယ်။ နံနက်မိုးသောက် အလင်းရောက်လို့ မျက်စိနှစ်လုံးပွင့်လာတဲ့အချိန်ကစပြီး ကိုယ့်စိတ် ကို check လုပ်၊ ဘာတွေ တွေးနေလဲ၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ လောဘရှိနေလား၊ ဒေါသရှိနေလား၊ မောဟရှိနေလား၊ စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိသလား၊ အာရုံနဲ့တွေ့ရင် စိတ်ဟာ အညစ်အကြေးတွေရှိနေလားဆိုတာ ကိုယ်ကCheck လုပ်ရမယ်၊ လုပ်တဲ့အခါကျတော့ ညာဏ်မရှိရင် သိမလား၊ မသိဘူးတဲ့။ ကိုယ်ဝတ်တဲ့အ၀တ်မှာတော့ ပေတယ်ဆိုတာ မသိဘူးလား၊ သိတယ်၊ စိတ်ထဲမှာလည်း ညစ်ပေလာရင်သိရမယ်၊ မသိရင် ညစ်ပေမှုကို ဖယ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် စိတ်၏အညစ်အကြေးကိုသိဖို့ ပညာလိုအပ်တယ်၊ ပညာသာလျှင် စိတ်မညစ်အကြေးကို ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်မို့ သိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ ဒီလိုပြောတာ။ ကိုယ့်စိတ်လေးဖြူစင်ဖို့ အရပ်စကားပြောရင် လွယ်တာပေါ့၊ စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထား ဖြူစင်အောင်ထားဆိုတာ ဘယ်ဟာကဖြူစင်တုန်း ဘယ်ဟာက မည်းတာတုန်းမသိရင် ဘယ်လိုလုပ် ဖြူစင်အောင်ထားမလဲ၊ မသိနိုင်ဘူး၊ ဟုတ်ရဲ့လား၊ ဖြူစင်တာကို မည်းတယ်ထင်နေတယ်၊ မည်းတာကိုဖြူစင်တယ်ထင်တယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ဖြူစင်အောင် လုပ်မလဲ၊ပညာရှိမှဖြူ မဖြူသိနိုင်မယ်မဟုတ်လား၊ ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရားက “ပညာဖြင့် စိတ်ကိုဖြူစင်စေရမယ်“လို့ ဖြေလိုက်တာ။
ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ အိပ်မက်နှင့်ဘုရား၊ ရဟန္တာ
မိမိသည် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့တွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်စဉ် အတွင်းဝယ် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို စိတ်ပါဝင်စားကြသော ရုရှားလူမျိုးများက ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့်ပတ်သက်၍ သိလိုသည်များကို မေးမြန်းကြပါသည်။ ၄င်းတို့မေးသော မေးခွန်းများစွာထဲမှ မေးခွန်းတစ်ခုရဲ့အဖြေကို မိမိနားလည်သလို တင်ပြရလျှင် ၀ိပဿနာ တရားစခန်းပွဲ တစ်ခုတွင် ယောဂီတစ်ဦးကမေးသည်မှာ ’ဘုရား၊ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များသည် တပည့်တော်တို့ လူသားများကဲ့သို့ အိပ်မက်မက်ကြပါသလား’တဲ့။ ကိသေသာ၊ အာသဝေါ၊ ၀ိပလ္လာတရားတို့ကို အကြွင်းအကျန်မရှိအောင် ပယ်သတ်တော်မူပြီးဖြစ်သော ဘုရားရှင်၊ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အိပ်မက်အမျိုးမျိုးတို့ကို မြင်မက်တော်မူကြခြင်းမရှိတော့ပေ။ ဘုရား၊ရဟန္တာ သူတော်စင် တို့သာမဟုတ်၊ သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်အရိယာသူတော်စင်များသည်လည်း အချို့သော ကိလေသာ၊ အာသဝေါ၊ ၀ိပလ္လာသတရားတို့ကို ပယ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် အိပ်မက်မြင်မက်သည်မှာ နည်းပါးသွားတော်မူကြပါသည်။ ကိလေသာ၊ အာသဝေါ၊ ၀ိပလ္လာသတရားတို့ကို မပယ်နိုင်ကြသေးသော ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း အိပ်မက်အမျိုးမျိုးတို့ကို မြင်မက်တတ်ကြသည်။ ရံခါ ကောင်းသောအိပ်မက်၊ ကြည်နူးစရာ ကောင်းသော ဘုရားဆင်းတုတော်များ ဖူးမျှော်ရခြင်း၊ အလှုဒါနပြုလုပ်ရခြင်းစသောအိပ်မက်များမြင်မက်တတ် ကြသလို ရံခါတွင် ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစရာကောင်းသော မကောင်းသောအိပ်မက်တို့ကို မြင်မက်ရတတ်သည်။ ထိုသို့ မကောင်းသော အိပ်မက်၊ ထိတ်လန့် ခြောက်ခြားစရာ ကောင်းသော အိပ်မက်တို့ကို မြင်မက်ရသောအခါ ကောင်းစွာအိပ်ပျော်ခြင်း၊ အေးချမ်းစွာ နိုးထခြင်းများ မဖြစ်ကြတော့ပေ။ ကိလေသာ၊ အာသဝေါ၊ ၀ိပလ္လာသတရားတွေကင်းတော်မူသော ဘုရားရှင်နှင့်ရဟန္တာသူတော်စင်များ မှာမူ အိပ်မက်မက်ခြင်းမရှိဘဲ အေးချမ်းစွာ အိပ်စက်တော်မူနိုင်ကြသည်။သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ် အရိယာသူတော်စင်များသည်လည်း အိပ်မက်မက်ခြင်းများ အဆင့်ဆင့် နည်းပါးသွားကြ၍ အေးချမ်းစွာ အိပ်စက်တော်မူကြရသည်။
၀ိပလ္လာသတရား(၁၂)ပါး(၁) အနိစ္စလက္ခဏ၌ နိစ္စဟုအမှတ်မှားသော သညာဝိပလ္လာသ၊(၂) အနိစ္စလက္ခဏ၌ နိစ္စဟုအသိမှားသော စိတ္တ၀ိပလ္လာသ၊(၃) အနိစ္စလက္ခဏ၌ နိစ္စဟုအယူမှားသော ဒိဋ္ဌိဝိပလ္လာသ၊(၄) ဒုက္ခလက္ခဏာ၌ သုခဟု အမှတ်မှားသော သညာဝိပလ္လာသ၊(၅) ဒုက္ခလက္ခဏာ၌ သုခဟုအသိမှားသော စိတ္တ၀ိပလ္လာသ၊(၆) ဒုက္ခလက္ခဏာ၌ သုခဟုအယူမှားသော ဒိဋ္ဌိဝိပလ္လာသ၊(၇) အနတ္တလက္ခဏာ၌ အတ္တဟုအမှတ်မှားသော သညာဝိပလ္လာသ၊(၈) အနတ္တလက္ခဏာ၌ အတ္တဟု အသိမှားသော စိတ္တ၀ိပလ္လာသ၊(၉) အနတ္တလက္ခဏာ၌ အတ္တဟု အယူမှားသော ဒိဋ္ဌိဝိပလ္လာသ၊(၁၀)အသုဘလက္ခဏာ၌ သုဘဟုအမှတ်မှားသော သညာဝိပလ္လာသ၊(၁၁) အသုဘလက္ခဏာ၌ သုဘဟု အသိမှားသော စိတ္တ၀ိပလ္လာသ၊(၁၂) အသုဘလက္ခဏာ၌ သုဘဟုအယူမှားသော ဒိဋ္ဌိဝိပလ္လာသ၊ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည် ၄င်းဝိပလ္လာသတစ်ဆဲ့နှစ်ပါးထဲတွင် ဒိဋ္ဌိဝိပလ္လာသ(၄)ပါး၊ အနိစ္စလက္ခဏ၌ နိစ္စဟုအမှတ်မှားသော သညာဝိပလ္လာသ၊ အနိစ္စလက္ခဏ၌ နိစ္စဟုအသိမှားသော စိတ္တ၀ိပလ္လာသ၊ အနတ္တလက္ခဏာ၌ အတ္တဟုအမှတ်မှားသော သညာဝိပလ္လာသ၊ အနတ္တလက္ခဏာ၌ အတ္တဟုအသိမှားသော စိတ္တ၀ိပလ္လာသ၊ ဤ၀ိပလ္လာသတရား(၈)ပါးကို ပယ်နိုင်တော် မူကြသည်။ ထို့ကြောင့် သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ထက် အိပ်မက်မက်ခြင်းများ နည်းပါးသွားတော်မူကြသည်။ သကဒါဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်သည် အသုဘလက္ခဏာ၌ သုဘဟုအမှတ်မှားသော သညာဝိပလ္လာသ၊ အသုဘလက္ခဏာ၌ သုဘဟု အသိမှားသော စိတ္တ၀ိပလ္လာသ ဤနှစ်ပါးတို့ကို နည်းပါးအောင်၊ ခေါင်းပါးအောင်၊ ပါးလွားအောင်၊ အားနည်းအောင် ပြုလုပ်နိုင်ကြ၍ အိပ်မက်မက်ခြင်းများ နည်းပါးသွားတော်မူကြသည်။ အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သကဒါမ်ဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်က နည်းပါးအောင် ပြုထားသော အထက်ပါဝိပလ္လာသတရားနှစ်ပါးကို အပြီးသတ် ပယ်နိုင်တော်မူကြသည်။ ထို့ကြောင့် သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်တို့ထက် အိပ်မက်မက်ခြင်းများ နည်းပါးသွားတော်မူကြပါသည်။ ကျန်သော ဒုက္ခလက္ခဏာ၌ သုခဟု အမှတ်မှားသော သညာဝိပလ္လာသ၊ ဒုက္ခလက္ခဏာ၌ သုခဟုအသိမှားသော စိတ္တ၀ိပလ္လာသ ဤ၀ိပလ္လာသတရား(၂)ပါးကို လုံးဝအကြွင်းအကျန်မရှိ ပယ်သတ် တော်မူကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကိသေသာ၊ အာသဝေါ၊ ၀ိပလ္လာတရားတို့ကို အကြွင်းအကျန် မရှိအောင် ပယ်သတ် တော်မူပြီးဖြစ်သော ဘုရားရှင်၊ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အိပ်မက် အမျိုးမျိုးတို့ကို မြင်မက်တော်မူကြခြင်း မရှိတော့ဘဲ အေးချမ်းစွာအိပ်စက်ခြင်း၊ နိုးထခြင်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းခြင်းသုခချမ်းသာကို ရရှိတော်မူကြရသည်။
မိမိသည် စနေနေ့တိုင်း ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ ယောဂစင်တာတစ်ခုမှာ ၀ိပဿနာတရားကို သွားပြပေးရသည်။ ယောဂီက ’ယခုအခါ ဤရုရှားနိုင်ငံမှာ ယောဂကျင့်စဉ်သည် လူကြိုက်များထင်ရှားသော ကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၀ိပဿနာကျင့်စဉ်နှင့် ယောဂကျင့်စဉ် ဘယ်လို ကွာခြားပါသလဲ? တဲ့။ ဒီလို မျှော်လင့်မထားတဲ့ မေးခွန်းတွေ တော်တော်များများတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ၄င်းမေးခွန်းကို မိမိနားလည်သလို ဖြေရရင် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ၀ိပဿနာကျင့်စဉ်ကို ယောဂကျင့်စဉ်နှင့် မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။ မိမိသည် ယောဂဆရာတစ်ဦးမဟုတ်တဲ့အတွက် ယောဂကျင့်စဉ်အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မသိပါ။ သို့သော် မိမိသိသလောက်တော့ ၀ိပဿနာကျင့်စဉ်နှင့်ယောဂကျင့်စဉ်ဟာ ကျင့်ပုံခြင်းမတူသလို ရည်မှန်းချက်ခြင်းလဲ မတူပါဘူး။ ရရှိလာတဲ့ အကျိုးရလာဒ်ခြင်းအားဖြင့်လဲ မတူပါဘူး။ ၀ိပဿနာတရား အားထုတ်ခြင်းကို ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေခြင်းမဟုတ်၊ အသက်ရှုလေ့ကျင့်နေသော ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမဟုတ်ဟု နားလည်ပါ။ ၀ိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ သေသေချာချာ သိအောင်လို့ မိမိရဲ့ ခန္ဓာအစဉ်တွင် သတိတင်ပြီး ရှုမှတ်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ သတိပဋ္ဌာန်အကျင့်ကို ကျင့်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ သတိဖြင့်ရှုမှတ်နေဖို့၊ သတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ဖို့သာအရေးကြီးပါတယ်။
၀ိပဿနာတရားကို အားမထုတ်ခင်မှာ ကိုယ်ကျင့်သီလကို ဖြူစင်အောင် စောင့်ထိန်းရပါမယ်။ အဲ့ဒီ ကိုယ်ကျင့်သီလဟာ လူ့သီလ၊ ရှင်သာမဏေသီလ၊ ရဟန်းသီလစသည် အဆင့်ဆင့် ကွဲပြားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လူတို့လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် လူ့သီလကိုပဲ ပြောရအောင်။ ယင်းလူ့သီလဟာ ငါးပါး၊ ရှစ်ပါး၊ ကိုးပါးရယ်လို့ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကျင့်သီလဖြူစင်ဖို့ရာ အနည်းဆုံးတော့ ငါးပါးသီလကို စောင့်သုံးရပါမယ်။ သီလရှိမှ စိတ်တည်ငြိမ်မှု သမာဓိဖြစ်ပါတယ်။ သမာဓိဖြစ်မှ ရုပ်နာမ်တရားတွေရဲ့ ဖြစ်စဉ်၊ ပျက်စဉ်တွေကို သိနိုင်တဲ့ အသိညာဏ် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ ၀ိပဿနာတရားကို စနစ်တကျကောင်းစွာ အားထုတ်ခြင်းကြောင့် (၁) လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟစသော ကိလေသာအစေး စိတ်အညစ်အကျေးတို့မှ ကင်းဝေးနိုင်ခြင်း။(၂) စိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်းမှ လွန်မြောက်နိုင်ခြင်း။(၃) ငိုကြွေးခြင်းမှ လွန်မြောက်နိုင်ခြင်း။(၄) ကိုယ်ဆင်းရဲတို့ ချုပ်ငြိမ်းကွယ်ပျောက်နိုင်ခြင်း။(၅) စိတ်ဆင်းရဲတို့ ချုပ်ငြိမ်းကွယ်ပျောက်နိုင်ခြင်း။(၆) အရိယာမဂ်၊ ဖိုလ်ကို ရနိုင်ခြင်း။(၇) နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ခြင်းဟူသော အကျိုးတရား(၇)ပါးကို ရရှိနိုင်ကြောင်းကို မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တော်မှာ ရဲရဲကြီးအာမခံထားပါတယ်။
ထိုသို့ ၀ိပဿနာတရားကို စနစ်တကျ လေ့လာအားထုတ်ပါလျှင် အရင်ကထက် ကိုယ်အမူအရာပိုပြီး ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့လာပါတယ်။ နှုတ်အပြောအဆိုတွေလဲ အရင်ကထက် ချိုသာယဉ်ကျေးလာပါတယ်။ ကြမ်းကြမ်း တမ်းတမ်း၊ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် မပြောတော့ပါဘူး၊ စိတ်ဓာတ်တွေလဲ မြင့်မားလာပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာမှု၊ စိတ်အေးချမ်းမှုများ အရင်ကထက်ပိုပြီး ရလာပါတယ်။ ရှေးကထက် သူတစ်ပါးအပေါ်မှာ မေတ္တာပိုထားနိုင်ခြင်း၊ နားလည် ခွင့်လွတ်သည်းခံနိုင်ခြင်း၊ အရာရာတွင် သတိပိုကောင်းလာခြင်း၊ အများနှင့် လိုက်လျောညီထွေ နေထိုင်တတ်ခြင်း၊ ညဏ်ပညာများထက်မြက်လာခြင်း၊ ဒေါသထွက်တာနည်းလာခြင်း၊ ဘုရား၊ တရား၊သံဃာရတနာသုံးပါးအပေါ် ပိုမိုယုံကြည်လာခြင်း၊ မိဘ၊ ဆရာသမားတွေရဲ့ကျေးဇူးကို ပိုမိုသိမြင် နားလည်လာခြင်းစသော ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကို မျက်မှောက်ကိုယ်တိုင် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ရုရှားသာသနာပြုဆရာတော်၁၃/၂/၂၀၁၁ More Articles...
သမ္မုတိသစ္စာနှင့်ပရမတ္တသစ္စာ	မသေခင် တရားမြင်ဖို့ အရေးကြီးသည်
Copyright © 2012 --- RussiaSayadaw
Hosting & Domain Donated by : DhammaMoscow@Ru
Design created by : Thant Zin